Isitudiyo sangoku, esimnandi, imizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo semetro
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMałgorzata
Isitudiyo sanamhlanje, esikwindawo entle, esandula ukuhonjiswa ngokutsha.
Indawo egqibeleleyo, epholileyo yokurenta umntu omnye okanye ababini. Ifakwe kufutshane nesikhululo sikametro (metro Ursynów, malunga nemizuzu emi-5 ngokuhamba). Kuthatha kuphela malunga nemizuzu eyi-12 ukufika kumbindi wesixeko.
Isakhiwo sitsha kwaye sinokhuseleko 24/7. Ikwanayo nendawo enkulu eqhelekileyo, apho unokuchitha khona ixesha lakho. Ngelishwa, akukho lift.
ndicela uhloniphe abamelwane bakho. Ixesha lokufika ekhaya ePoland liqala ngentsimbi yeshumi ebusuku kwaye liphele ngentsimbi yesi-6 kusasa.
Iivenkile ezininzi zegrosari kunye nezinto eziluncedo ezijikeleze (i-Żabka, iBiedronka, iRossmann, iikhemesti ezi-2, iCosta Kofi, ivenkile yeentyatyambo, icawa yamaKatolika nokunye). Iipaki ezi-2 ngaphakathi kwe-10 imiz umgama (Kopa cwila, John Paul II Park)
Ezinye zeevenkile ezinkulu zepastry kunye neendawo zokutyela kumgama wokuhamba ok. ICukiernia Sowa (ipastries), iSzara Eminencja (indawo yokutyela), iKrowarzywa (ukutya kwevegan), i-BRU bar kawowy (ikofu ephilayo), kodwa uya kufumana iindawo zokutya okukhawulezayo ezikufutshane ukuze uncede (iPizza Hut, iSubawy nokunye)
xa ufuna uncedo lwam ngayo nantoni na, ndisesandleni sakho. Zive ukhululekile ukuba uqhagamshelane nam nge airbnb okanye umyalezo obhaliweyo